Kalitao - Filter Tech
Filtration amin'ny trano iray manontolo
Filtration amin'ny lakozia sy fandroana
Filtration Osmosis mivadika
Rafitra fanivanana ho an'ny lakozia
Rafitra fanasiana fandroana
Avadiho amin'ny kalitaon'ny rano ny kalitaon'ny sivana
Mikatsaka ny hatsarana amin'ny kalitao
Ny kalitao avo lenta dia avy amin'ny haitao marina, rafitra fitantanana tonga lafatra ary fanaraha-maso henjana. Mitady kalitao hatrany izahay mandritra ny fizotrany na ho an'ny akora na ho an'ny famokarana na ny vokatra vita. Ny vokatray dia nomena ireto fanamarinana manaraka ireto: NSF, WQA, IAPMO, WRAS, ACS, MOH, CCC, CQC, CE, EMC, ROHS, GS, PCT, IMQ, UL, FCC, CB, NOM, SIRIM. JBE (ST), TISI, fiarovana sns.
ny Ny R&D an'ny Filter Tech dia manaraka tanteraka ny fenitra sy ny fitsipiky ny indostrian'ny fitsaboana rano. Raisinay ho fitantanana lehibe ny fitantanana ny tetikasa ary ampiasainay ny fitaovana dimy sy ny foto-kevitra momba ny injeniera APQP, FEMA, MSA, PPAP ary SPC hampiharana ny fanaraha-maso ny fizotran'ny mpanjifa mba hahafahan'ny vokatra mahafeno ny fangatahan'ny tsena haingana kokoa sy marina kokoa amin'ny fiantohana kalitao.
Fananganana laboratoara fanadinana hanatsarana ny fari-pitsaboana
Ny toerana fanandramana fanivanana rano ao an-trano dia natsangana araka ny fenitra fanamarinana NSF, WQA ary fahazoan-dàlana hafa. Ny fahafaha-mitantana sy fitsapana anay dia mifanaraka amin'ny fenitra ekena iraisam-pirenena natao ho an'ny vokatra mifandraika amin'ny rano. Ny laboratoara dia manana fitaovana fitiliana valo NSF valo, izay afaka manao fanaraha-maso feno momba ny fiarovana ara-materialy, ny fiarovana ara-drafitra, ny fiarovana azy io, ny fiarovana ny herinaratra, ny fiarovana ny fitaterana ary ny fahombiazan'ny filtration, ao anatin'izany ny fitsapana hafa mihoatra ny zato, ohatra, ny tanjaka ara-drafitra. , anti-antitra, acoustic, microbiology, electromagnetic mifanentana, sns.
Tamin'ny volana septambra 2018, ny laboratoara fitiliana ao an-trano dia voamarina avy amin'ny Sampan-draharahan'ny Serivisy nasionaly momba ny fanarahan-dalàna (CNAS)
Fanaraha-maso kalitao henjana
Ny tombony azon'ny mpanjifa dia mahatonga io ezaka io ho mendrika. Mampihena ny risika amin'ny alàlan'ny famelana antsika hiatrika ny olana mety hitranga mialoha, noho izany, amin'ny fanomezana antoka azo antoka ny kalitao, manampy amin'ny fampihenana ny fitarainan'ny vokatra izany ary hitsitsy ny fandaniana aorian'ny fivarotana ho anao.
Fanamarinana tsy azo ihodivirana
Ireo tetikasa mitaky fanamarinana dia afaka mahazo tombony amin'ny laboratoara ihany koa, satria afaka mihazakazaka fitsapana ao an-trano alohan'ny fitsapana ataon'ny vatana fanamarinana manam-pahefana. Midika zavatra betsaka ho anao izany amin'ny fisorohana ny famerenanao ireo tsy fahombiazan'ny fanandramana araka izay tratra mba hanafainganana ny fizotran'ny fanamarinana.
Fanampiana amin'ny fampiharana
Ny lisitry ny vokatra sy ny fanamarinana dia midika zavatra betsaka amin'ny sivana rano. Ny sivana izay mahafeno ny fenitra dia afaka mampihena ny fihenan'ny loto amin'ny loto. Izahay dia mahay ary vonona hanampy anao hatrany handefa vokatra ho an'ny fanombanana avy amin'ny antoko fahatelo rehefa ilainao izany.
Mandray anjara amin'ny fizotran'ny fametrahana fenitra
Mandray anjara amin'ny fametrahana ny lalàna nasionaly momba ny kalitaon'ny rano, mametraka fenitra anatiny izay mihoatra ny lalàna nasionaly mihitsy aza. Isaky ny dingana fampandrosoana alohan'ny fandefasana vokatra, dia mijery tsara ny fanombanana ny kalitao sy ny fiarovana isika. Hotazominay hatrany ny kalitaon'ny vokatra tsy miovaova, azo itokisana ary azo antoka ho an'ny mpanjifa.
302-308, Siming Industrial Park, Distrikan'ny fifantohana indostrialy Tong'an, Xiamen, Sina.
Lazao TSIA amin'ny rano anaty tavoahangy sy mikroplastika
Sivana rano tokana izay mampihena ny isan-karazany ...
© Copyright - 2010-2021: Voatahiry ny Zo rehetra. Vokatra asongadina, Sitemap
Fanadiovan-drano ho an'ny rano mafy, Paompy Rafitra fanivanana rano, Rafitra Osmosis Reverse tsara indrindra, Sarina cartridges, Fanoloana sivana amin'ny cartridge amin'ny rano, Mpanadio rano amin'ny trano iray manontolo,